ကိတ်လွန်းလှတဲ့ တင်သားကြီးကို အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြီး ခပ်မိုက်မိုက်လေးကပြလိုက်ပြန်တဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ ဆက်ဆီ ဗီဒီယိုလေး – Cele Cupid
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ တင်သားကြီးကို အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြီး ခပ်မိုက်မိုက်လေးကပြလိုက်ပြန်တဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ ဆက်ဆီ ဗီဒီယိုလေး
EverBest M | May 19, 2021 | Celebrity | No Comments
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် … . ။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ရင် ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထားတဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ်ပါ တယ် … . ။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတူ လှပကြည်လင် တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီ ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက် စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး လည်းဖြစ်ပါ တယ် … . ။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယို လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ် … . ။ လတ်တ လောမှ ာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စားအလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့တာဖြစ် ပြီး ပုရိသတွေအများဆုံး ဝန်းရံခြင်း ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေ းထဲမှာ သဇင်ဦးတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုမှုရှိရှိ နဲ့ လှရက်လွန်းနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ သဇင္ဦးကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ … . ။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြရဲ့ရင္ ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူ ထားတဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလးျဖစ္ပါ တယ္ … . ။ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူ လွပၾကည္လင္ တဲ့ အသားအေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီ က်တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက္ စား ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး လည္းျဖစ္ပါ တယ္ … . ။
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် ဗီဒီယို ေလးေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္ … . ။ လတ္တ ေလာမွ ာေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စားအလွတရားေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူဖမ္းစားထားတဲ့ အလန္းစား ပုံေလးကိုေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုံေလးဟာ ၾကည့္ရႈသူေတြမ်ားျပားခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး ပုရိသေတြအမ်ားဆုံး ဝန္းရံျခင္း ခံေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ပုံေလ းထဲမွာ သဇင္ဦးတစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈမႈရွိရွိ နဲ႔ လွရက္လြန္းေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္အလွကေတာ့ ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားေနတာအမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း သဇင္ဦး ရဲ့ အမိုက္စား ပုံေလးကို ၾကည့္ရႈနိုင္ေစရန္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
လူနာတစ်ယောက်က ငွေလိမ်တောင်းခြင်း ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဝေဠုကျော်
အောက်တိုဘာ 22ရက်နေ့ USA မှာလူ သန်း (၂၀၀) Covid19 ကာကွယ် ဆေး စထိုးမယ့် အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လွင်မိုး
ရင်ခုန်သံအထွတ်အထိပ် ရောက်သွားစေမယ့် မတ်မတ် သင်ဇာရဲ့အမိုက်စား VIDEO
အသက်ရှုမှား လောက်တဲ့ အပြင်းစားညို့ချက် တွေ နဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ဗီဒီယို
Copyright © 2022 Cele Cupid.